China Baby smock orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Senlai
Fitsangatsanganana amin'ny Factory
Fandraisana Fitadiavana Baby Stroller
Kitapo fatoriana an-jaza
Ankizy manao akanjo ivelany
Ankizy Pu Raincoat
Skisuit an'ny ankizy
1. Ny saron-tranonay dia mifanaraka amin'ny endrik'ilay zaza. Ny lamba dia tantera-drano sy afaka miaina. Tsy ho goavambe amin'ny fahavaratra izy io, fa mafana foana amin'ny ririnina. Ny fonony dia afaka mamono ny sandrin-jaza eo alohan'ny vatana. Izy io dia afaka manakana tsara ny sakafo tsy hianjera amin'ny vatana.
2. Ny lamba dia vita amin'ny lamba polyester tsy misy rano, izay tsy tantera-drano. Vovoka, fotaka ary matavy ny lasopy legioma vita amin'ny varika. Nosakanan'ny smock daholo izany, ka tsy mila manova akanjo imbetsaka isan'andro ny ankizy, ary tena mety ny manadio azy ireo.
3. Ny fonony fonosinay dia lamaody amin'ny endriny, maro loko sy loko isan-karazany. Betsaka ny fomban'ny smock an'ny zanatsika, izay azo zaraina amin'ny fomba isan-karazany arakaraka ny mampiavaka azy. Ohatra, raha ny halavan'ny tanany, dia azo zaraina ho lamaody lava tanany, fomba fohy tanany ary tsy misy fomba tanany. Ny fomba lava lava dia mety kokoa amin'ny ririnina, ny fomba fohy fohy ary ny fomba tsy misy tanany dia mety kokoa amin'ny fahavaratra.
4. Araka ny famolavolana paosin'ny vary, dia azo zaraina ho any am-paosy farany ambany, any am-paosy, tsy misy am-paosy ary am-paosy azo ovaina. Ny famolavolana paosy vary dia ampiasaina indrindra hitazomana ireo sakafo miparitaka rehefa misakafo ilay zaza.
5. Araka ny halavany sy ny fomban'ny smock, azo zaraina ho zipo fohy, lava, lava, apron Raha ny fifandraisana aoriana dia azo zaraina ho vola Velcro, vola tady, fanesorana ny press.
Manaraka: Kitapo fatoriana an-jaza
Zazalahy zazalahy nifoka
Smock miloko zazakely
Fax: 0086-311 85983948
Eo ambanin'ny toe-javatra valanaretina, ny orinasa ...
Hijery misimisy kokoa +
© Copyright - 2020-2021: Voatahiry ny zonao rehetra.